यी हुन् ‘क्यान्सर किलर’ खानेकुराहरु l जानिराख्नुहोस !::Pathivara News
क्यान्सर भयावह रोग हो, जसको उपचार कठिन मात्र छैन, कतिपय अवस्थामा असंभव पनि । यद्यपी क्यान्सरको लक्षण सुरुवाती अवस्थामै थाहा भयो भने, उपचार हुन्छ । क्यान्सरलाई जितेर सामान्य जीवनमा फर्किएकाहरु हाम्रै समाजमा धेरै छन् ।
खानपानकै कारण क्यान्सर लाग्न सक्छ, क्यान्सर प्रतिरोधी गुण पनि खानेकुरामै हुन्छ । तर, सही खानेकुरा छनौट गर्नुपर्छ ।
हाम्रो भान्साकोठामा नै धेरै खानेकुराहरु छन्, जसमा क्यान्सर प्रतिरोधी गुण हुन्छ । के हुन् त ती खानेकुरा ?
बिडी वा चुरोट– बिंडी वा चुरोट पिउँदा शरीरमा क्यान्सर उत्पादक तत्व प्रवेश गर्छन् । यी तत्वले स्वस्थ कोशिकाहरुलाई रोगी कोशिकाहरुमा बदलिदिन्छन् र यही कोशिकाहरु क्यान्सरमा परिणत हुन्छन् ।
अस्वस्थ्यकर खाना– कुहिएको, बासी, सडेगलेको, तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा क्यान्सरको कारण बन्छ ।
सुर्यको किरण शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर, एउटा सिमासम्म मात्र । ओजन तहमा प्वाल हुनाले घामको साथमा हानिकारक अल्ट्राभ्वाइलेट किरणहरु पनि आउँछन् जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छन् । यी किरणहरुको सम्पर्कमा लामो समय रहँदा स्किन क्यान्सरको खतरा पैदा हुन्छ ।
शुक्रबार, फाल्गुन ११, २०७४ मा प्रकाशित